Kazakhstan: Miady Hevitra Momba Ny Milina Fikarohana Nasionaly Ny Bilaogera · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 14 Marsa 2018 2:40 GMT
Ny 11 Desambra 2008, nanoratra tao amin'ny bilaoginy, natokana hiresahana momba ny olan'ny fampandrosoana ny Teknolojiam-baovao ilay bilaogera Kazakhstani Nurlan, niresaka momba ilay antsoina hoe “KazNet” (ampahan'ny w.w.w Kazakhstani) mety hanana ny milina fikarohany tsy ho ela izy ary nanonona dokambarotra napetraka tao amin'ny tranonkala ofisialin'ny Sampam-panjakana ho amin'ny Fampiasana Solosaina sy ny Fifandraisana (AIC) [ru]:
Ny sampan-draharahan'ny teknolojiam-baovao ao amin'ny Sampam-panjakana momba ny Fampiasana Solosaina sy ny Fifandraisana dia faly mampahafantatra anao fa mikasa hamorona Rafitra Fikarohana Nasionaly ao anatin'ny sehatry ny fampandrosoana ny KazNet izahay. Ny rafitra fikarohana dia hifantoka amin'ny fiarahamonina. Noho izany, mangataka amin'ny fiarahamonin'ny aterineto izahay mba hanampy anay hisafidy anarana ho an'ny mili-pikarohana.
Ao anatin'ny adihevitra etsy ambany, misy ireo bilaogera miresaka tsy momba ny mety ho anaran'ny mili-pikarohana fotsiny ihany, fa ny tena ilàna ny fanavaozana manontolo koa.
Araka izany, mihevitra i Zhomart [ru], fa “fomba iray hafa amin'ny fanadiovam-bola” izany. Misalasala momba ny fahaizana ara-teknika hanatanterahana azy i Valentin [ru]:
“Maimbomaimbo izany. Ny fomba tsara indrindra azon'izy ireo atao dia ny mamorona katalaogin-tranonkala. Inona marina no antony hanaovana zavatra efa misy? “Tsy hanana fahaizana ampy hanamboarana zavatra tsara kokoa noho ny mili-pikarohana efa misy izy ireo. Mety ho hosoka amin'ny fandaniana ny volan'ny mpandoa hetra izany”.
Assasin indray mihevitra fa tokony hamaha ny olana anatiny aloha izy ireo:
“Inona no resahanao, milina fikarohana? Tsy mahavita lohamilina dns araka ny tokony izy akory izy ireo. Jereo – tsy mamerina pejy ny aic.gov.kz, fa ny http://www.aic.gov.kz ihany no mandeha. Nisy ny valandresaka antserasera niarahana tamin'i Kuanyshbek Esekeev, filohan'ny AIC momba ny “e-governemanta.” Tsy nahavita namaly fanontaniana mivaingana izy … Milina fikarohana … Mety ho 50 taona no hanaovany izany “.
Be dia be ny fisalasalana, ary zara raha takatra izany. Inona no ilaina hanamboarana bisikileta? Inona no ilaina amin'ny fanamboarana milina fikarohana vaovao (iza no manampy azy hanao izany – Yandex, Google sa Microsoft), raha efa manome tondro marina sy mahita tsara ireo tranonkala Kazakhstani ny milina fikarohana efa misy. Tsy mitaky fotoana na fampiasana vola fanampiny izy ireo, indrindra ao anatin'ny fotoan-tsarotra amin'ny krizy ara-toekarena.
Ankoatra izany, ao anatin'ny toerana somary hafahafa ny fitaovana vaovao. Raha ny tena marina, mbola tsy mazava loatra ny dikan'ny hoe “mitodika any amin'ny fiarahamonina” amin'ilay milina fikarohana. Ankoatra izay, raha natao hampiraisana ny firenena sy hanesorana ny sisintany ny aterineto, nahoana no mila milina fikarohana ao an-toerana i Kazakhstan, na dia mandeha tsara aza izany? Inona moa izany: fanamafisana orina ny tenany, antony iray handaniana ny tetibolam-panjakana sa tena filàna ara-teknika?
Raha miresaka fatratra momba io olana io ny bilaogera, nanonona tarehimarika vitsivitsy i Alexandr Lyakhov, mpikarakara ny Lokan'ny Aterineto Kazakhstani Fanao Isan-taona sy iray amin'ireo bilaogera voalohany sy hajaina indrindra ao amin'ny KazNet:
Araka ny paragrafy 8.1.1 amin'ny “Fandaharan'asa momba ny ady amin'ny elanelana be loatra ao amin'ny aterineto any Kazakhstan tamin'ny taona 2007-09″ (natsangan'ny AIC izany), 28,8 tapitrisa KZT (efa 242.000 dolara) no nolaniana tamin'ny taona 2007 sy 2008 tamin'ny teti-bola ho fampandrosoana ny “rafitra fikarohana ara-tsaina”.
Bilaogera Valentin nivazivazy ratsy fa mety ho mora kokoa ny manarama olona izay hahazo fangatahana, google ho azy ireo ary mandefa ny valiny any amin'ny mpiserasera.
Saingy efa lasa lavitra noho ny vazivazy ny raharaha: andro maromaro lasa izay, bilaogera Zhomart namoaka taratasy misokatra ho an'Andriamatoa. Esekeev, filohan'ny AIC, tao amin'ny bilaoginy, mamariparitra ny olana ary mangataka ny fanajanonana ny tetikasa. Nangataka tamin'ireo bilaogera ihany koa izy mba hanasonia izany taratasy izany sy handefa ny taratasy any Astana.